Ady an-trano… angano angano | NewsMada
Ady an-trano… angano angano
Par Taratra sur 06/12/2018
Efa vonto sy donton’ny politika? Na potiky ny politika… Ady an-tsena na ady an-dalana, misy mitsara ambony ihany hoe ahina ho ady an-trano. Mba zavatra hafa ahay… Mahavariana, mahasaikatra, mampalahelo… Saika isaky ny fotoan-tsarotra lalovan’ny firenena, misy hatrany ny miresaka sy mamelona ahiahy ny mety hisian’ny ady an-trano.
Tsy misy lalan-kivoahana afa-tsy ady an-trano raha vao tojo ny raharaha sarotra? Ny vahoaka anefa tsy niady, na be aza izay manahirana sy mafy nolalovan’ny firenena izay. Saika ny mpanao politika na manao fijery politika hatrany no mandranitra ady an-trano. Tsy mahajery lavitra? Na tsy mahita afa-tsy izay mety ho tombontsoany manokana…
Misy hatrany ny mandrisika sy mandranitra vahoaka amin’izao karazana fampangotsohana rehetra izao hoe ahina ny ady an-trano, na tombanana hiafara amin’ny ady an-trano izay mitranga. Nahoana? Amin’ny vahoaka ao anatin’ny fahasahiranana lalina sy maharitra, saika ny maha olombelona sisa tena mibahan-toerana ho azy amin’izany.
Tsy lavina ary tokony hopotsirina ny vay mba hiara-mahita ny marina, mandringa na tsy mety ho marin-toerana ny fampandrosoana natao teto hatramin’izay. Saika misy hatrany tsinona ny tany lavitra fanjakana, ny zanak’Ikalahafa… Tsy mbola mahahenika ny Malagasy rehetra ny hoe fampandrosoana, na amin’ny fahazoam-baovao ihany aza, ohatra.
Izay tsy fitoviana na tsy fampitoviana lenta ny samy Malagasy izay no andranitana ady an-trano? Tsy miady amin’izany ny vahoaka ifotony, na tsy miady aminy aza ny raharaha: misy fiangarana, fanaovana tsinontsinona. Tsy izy no ndeha hiady ho azy fa misy mandranitra sy mampirisika ao. Izay no tena zava-doza mendrika fongarina sy fongorina.
Saika ady an-tsena na ady an-dalana hatrany no anaovana tsahoina hoe ahina ho ady an-trano fa tsy mahahenika an’i Madagasikara: hifanao ankolafy amin’ny inona na iza, ohatra? Tsy fandriampahalemana no hoe ady an-trano? Angano angano: zava-doza; angano angano fandrebirebena saina ihany koa. Aleo ampiadiana ny hevitra tsy hiadiana?